Ejipta: Manonofy Ampitso Tsaratsara kokoa · Global Voices teny Malagasy
Ejipta: Manonofy Ampitso Tsaratsara kokoa
Voadika ny 07 Febroary 2011 5:35 GMT
Vakio amin'ny teny Português, Français, Shqip, Español, 繁體中文, 简体中文, 日本語, македонски, English
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitra manokana ataonay momba ny Fihetsiketsehana any Egipta 2011.
Raha miditra indrindra amin'ny andro faha-12 ny hetsika ao Ejipta, manomboka mihakivy ny sasany, saingy ny hafa kosa mbola manana fanantenana betsaka ny amin'ny hahitam-bokatra tsara. Ilay vehivavy Eman AbdElRahman mpanoratra ho an'ny Global Voices dia isan'ireto farany; ao amin'ny bilaoginy, mizara ny fahatsapany mikasika ny fanoherana mitohy izy, izany rehetra izany dia nanomboka amina hira izay ankafiziny:
Ny 21 Febroary 2010, ary taorian'ny nijerena ny resadresaka iray niarahana tamin'i Dr. ElBaradei tao amin'ny Fahitalavitra Dream2 , dia nandefa lahatsary iray aho, ilay hira “Dream with me (Manofisa miaraka amiko) ” an'i Hamza Namira.. Tamin'io andro io dia nanonofy hahita ny fireneko afaka aho. Afaka amin'ny jadona, ny kolikoly, ny herisetra ary ny henatra. Nino tanteraka ilay nofy aho ka ny faniriako rehetra dia natokako manontolo fotsiny ho an'ilay andro izay hijoroan'i Ejipta ho ilay hany tokana nolalaiko talohan'ny nahitako azy..
Manohy i Eman:
Androany, nahita indray an'ilay hira aho fa miaraka amina sary hafa, avy amin'ny fanoherana. Ny fanoheranay.. Tampoka teo dia nangovitra aho sady nipararetra. Tsy mbola niteny na tamin'iza na tamin'iza mihitsy aho fa hoe tsy mbola resy lahatra.. Na dia miaina isa-minitra azy ity aza, ary isa-tsegondra nandritra ny 12 andro, tsy mety mino ny zava-mitranga aho. Matetika aho no mifoha maraina ary miteny irery hoe “Nanonofy kosa aho”. Nefa tsy nofy intsony mihitsy ity..
Betsaka no azoko ambara. Betsaka no azo soratana mba hamelomana ny fahatsiarovana, saingy tsy ampy ny teny hilazàna azy manoloana izay iainako ankehitriny.
Izao aho vao nahatsapa ny halalin'ny fitiavako an'i Ejipta, be lavitra noho izay niheverako azy..
Ilay lahatsary, eny fa na ny lahatsoratra tao amin'ny bilaoginy aza, dia nahasarika tao amin'ny Twitter, miaraka amin'ireo hafa mizara ny fomba fisainany.
@msheshtawy, mizara ilay lahatsary, dia manoratra hoe:
Manonofy Ampitso tsaratsara kokoa aho, Masr bokra a7la http://youtu.be/zHZbZm69PCE #egypt #jan25
@ishtarmuz mizara ity lahatsary ity ihany koa, amin'ny fandefasana tweet:
Jereo ny ‘Dream With Me (Ehlam Ma'aya) – Revolisionan'ny 25 Jan ‘ #JAN25 Ho azonao ny hafatra na tsy hay aza ny teny. http://bit.ly/gNGqBZ
Ny fanofisana hoavy tsaratsara kokoa ho an'i Ejipta dia nanjary lohahevitra iray eny anivon'ny fampahalalam-baovao sosialy; video iray hafa miresaka momba ny nofinofim-panavaozana:
Ao amin'ny Twitter, @randa610 dia mizara ny nofinofiny azy manokana ho an'i Ejipta:
Ny Ejipta nofisiko: izay tsy hilalaovan'ny hafa ny fiainako intsony ho fikatsahana fahefana sy vola bebe kokoa. #jan25 #hopeisintheair
Eo ampirariana torimaso sambatra, @pakinamamer dia misaotra ireo mpanohaana ny fireneny avy amin'izao tontolo izao:
Miaraka amin'ireo namana mahafinaritra sy ireo vahiny manohana anay & mivavaka ho an'ny fandrianay fahalemana, azoko antoka fa mba handry ampilaminana aho. Tafandria mandry daholo <3 #Jan25 #Egypt